IBC ကို Seychelles တွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း - Seychelles ရှိ LLC
သင်သည်စေးရှဲလ်ကုမ္ပဏီ၌အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
● Seychelles ဘဏ်စာရင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
●ဘဏ်စာရင်းဖြစ်သော Seychelles နှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles ၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် Seychelles ၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကို Seychelles ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Seychelles ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိနိုင်သည်။
Million Makers Seychelles သည် Seychelles နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက် Clients များကိုအခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
Seychelles မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်တည်နေရာများနှင့် Seychelles မှလွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်စေးရှဲလ်ကုမ္ပဏီတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့် Seychelles အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလျှောက်လွှာတင်သည်။
သင်၏ကုမ္ပဏီ Seychelles လိုအပ်ချက်များတွင် Seychelles တွင်ဘဏ်အကောင့်ရှိပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်သင်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်ရင်။
Seychelles ၌မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်သုံးပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်း (အမိန့်ပေးလျှင်) ။
Seychelles နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖြေရှာမှုများ၊ Seychelles အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles အတွက်ဘဏ်အကောင့်၊ Seychelles အတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ Seychelles အတွက် Virtual နံပါတ်၊ Seychelles အတွက် CRM Solutions, Seychelles အတွက် virtual office၊ နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
ယနေ့သင်၏ Seychelles IBC နာမည်ကိုရယူပါ။
သင်၏ Seychelles IBC နာမည်ကိုရှာပါ
နိဒါန်း Seychelles ကုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်းမှု
ကမ္ဘာ့အနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံများအနက်တစ်ခုဖြစ်သောစейшယ်လ်ကိုမူကျွန်းစုဝေးမှုနှစ်ခုမှပြုလုပ်သည်။ မာ့ခ်ျစုစုပေါင်း ၄၀ ကျော်၊ တောင်ထူထပ်သောကျွန်းစုများနှင့်ဒုတိယ၊ ပြင်ပအဆင့်၊ သန္တာကျွန်းများစုစုပေါင်း ၇၀ ကျော်တွင်စုရုံးထားသည်။ Mahe စည်း၏ကျွန်းများသည်အကြမ်းအားဖြင့်ရှိပြီးကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တင်းကျပ်စွာကုန်းမြင့်များနှင့်ဆင်ခြေလျှောများရှိသည်။ ထိုကျွန်းများ၏ယေဘုယျအပိုင်းမှာအပူပိုင်းဒေသအသီးအနှံများဖြစ်သောငွေဖြူရောင်ပင်လယ်ကမ်းခြေများနှင့်ဒီရေကန်များကိုလျစ်လျူရှုထားသည့်မြင့်မားသောဆွဲထားသောဥယျာဉ်များဖြစ်သည်။
သင်၏နိုင်ငံတွင်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်အားသာချက်များစွာရှိသည်။ Seychelles တွင်ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုareaရိယာသည်စီးပွါးရေး၏အဓိကကျသောနေရာဖြစ်သည်၊ ပင်လယ်ဘဏ္seာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပင်လယ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများစာရင်းသွင်းခြင်း၊ ဒီမှာ, fuse ကိုဘယ်လိုချဉ်းကပ်ရမလဲဆိုတာနှင့်အတူ Seychelles တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးရှစ်ခုကိုငါထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Seychelles ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်လမ်းကြောင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Seychelles အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ (IBCs) သည်နိုင်ငံသားမဟုတ်သူများအတွက်လူသိအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးသံသရာသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
IBCs အသစ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၄ နာရီသာပါဝင်သည်။ အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အသုံးပြုသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဘာသာစကားမှာအင်္ဂလိပ်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနည်းပါးလိမ့်မည်။ လာမည့်အရင်းအနှီးမလိုအပ်ပါ။ စံသတ်မှတ်ထားသည့်စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိသောကြောင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်အနည်းဆုံးလိုအပ်သည်။
လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုလိုအပ်ပါတယ်
အထူးသဖြင့်တစ် ဦး ချင်းအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်သောလုံခြုံရေးပြanနာသည်မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်ပူနေသောပြcatchနာဖြစ်သည်။ ကံအားလျော်စွာသင်သည်သင်၏စီးပွားရေးကိုစေးရှီးလ်ရှယ်လ်တွင်ဖွင့်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းပေါ်တွင်သင်၏လုံခြုံရေးကိုဥပဒေအရပြby္ဌာန်းထားသည်။ နောက်ခံအဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲ၏စရိုက်လက္ခဏာနှင့်တစ် ဦး ချင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပြင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏စရိုက်၊ အမျိုးမျိုးသောအကြီးအကဲများနှင့်အမြတ်အစွန်းပိုင်ရှင်များသည်လွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်သည့်အစီရင်ခံစာများကိုသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။
Seychelles သည် ထပ်မံ၍ လွတ်လပ်သောရပ်ကွက်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပြင်ပနိုင်ငံများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များကိုသတင်းပို့ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုပါဟုဆိုလိုသည်။ ထို့အပြင်နိုင်ငံသည်အီးယူငွေစုဆောင်းမှုဆိုင်ရာအခွန်ညွှန်ကြားချက်အပေါ်မှီခိုခြင်းမရှိပါ။ Seychelles တွင်အချက်အလက်များထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံရေးအရအလေးအနက်ထားမှုမရှိပါ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် Seychelles အတွက်စုစည်း၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက်အခွန်အကဲဖြတ်မရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတွင်နယ်မြေအခွန်အကောက်စနစ်ရှိပြီးနိုင်ငံပြင်ပ၌သင်ရရှိသည့်လစာသည်အခွန်အကဲဖြတ်မှုအပေါ်တွင်မူတည်သည်မဟုတ်။ သုညအခွန်ကောက်ခံမှုသည်စီးပွားရေးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ အကျိုးစီးပွားနှင့်တံဆိပ်ခေါင်းဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် element ကိုဖွဲ့စည်းပုံ
ကျယ်ပြန့်သောစီးပွားရေးအဆောက်အအုံများကိုတာ ၀ န်ယူရန် ရည်ရွယ်၍ Seychelles သည်သင်၏စီးပွားရေးကိုစည်းရုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝပြောင်းလဲနိုင်သည်။ IBCs အတွက်အကြီးအကဲတစ် ဦး နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး သာရှိသင့်သည်။ လူမျိုးစုအပေါ်အကန့်အသတ်မရှိ၊ ရပ်ကွက်အကြီးအကဲအတွက်လည်းမလိုအပ်ပါ။
Seychelles သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလက်ရှိဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာရုံးများကိုပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်အခြားသောငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပရီမီယံအုပ်ချုပ်ရေးကိုချဉ်းကပ်လိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံးကတော့, သင်သည်ပြည်ပကနေစံချိန်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်; ဘဏ်သို့လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လည်ပတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒါ့အပြင်အကောင့်များအတွက်မျှသို့မဟုတ်အနိမ့်အနည်းဆုံး equilibrium လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုမှတ်တမ်းများ မှလွဲ၍ လူမျိုးစုအပေါ်မှီခိုမှုမရှိပါ။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အနာဂတ်အောင်မြင်မှုသည်သင်ခိုင်မာအောင်လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည့်နိုင်ငံ၏ငွေကြေးအခြေအနေနှင့်တရားဝင်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ Seychelles တွင်ငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာတသမတ်တည်းတိုးပွားလာပြီးရပ်တန့်ခြင်း၏လက္ခဏာမပြပါ။ ထို့အပြင်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အနေဖြင့်ထပ်မံခိုင်မာမှုရှိစေရန်တာ ၀ န်ယူမှုလျှော့ချခြင်းကိုလျှော့ချခဲ့သည်။
Seychelles သည်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဖျူးစက်များနှင့် ပတ်သက်၍ လူသိများသောရည်မှန်းချက်ဖြစ်သောကြောင့်သင့်အားကူညီရန်အကူအညီများစွာရှိသည်။ သင်တစ် ဦး တည်းအနေဖြင့်တရားဝင်ဖြစ်သောစည်းလုံးမှုသံသရာကိုမခံစားရရန်သင်အခွင့်အရေးရနိုင်သည်မှာမတူညီသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဥပဒေရုံးများသည်သင့်အတွက်သင့်တင့်မျှတသောကုန်ကျစရိတ်အတွက်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကမ်းလှမ်းသည်။
ထို့အပြင်၊ သင်အသုံးချရန်သင့်တော်သောငွေကြေး၊ ဥပဒေနှင့်အတွင်းရေးမှူးများအထူးကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိသည်။ သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုသင့်အားကူညီနိုင်သည့်အတွေ့အကြုံရှိသောကျွမ်းကျင်သည့်ကျွမ်းကျင်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိပါသည်။ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အထူးအကူအညီလိုအပ်ပါကချက်ချင်းလက်လှမ်းမီနိုင်သည်။
ပေါင်းစည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်နှစ်စဉ်လိုအပ်ချက်များမှာအသေးအဖွဲကိစ္စ ဖြစ်၍ ၎င်းတို့သည်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏စံနှုန်းနှင့်မဆိုပြanနာဖြစ်ရန်မချဉ်းကပ်နိုင်ပါ။ သင်၏စီးပွားရေးကိုစတင်တည်ထောင်လိုက်သောအခါတိုင်းဤအရာသည်လုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။
အဆိုပါ အွန်လိုင်း HTML အယ်ဒီတာ ယခုသင်၏စာရွက်စာတမ်း၏အမြင်ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းအကြောင်းအရာကို format လုပ်ရန်ပြင်ပ CSS ဖိုင်တစ်ခုအားအသုံးပြုရန်ထောက်ခံသည်။
စေးရှဲလ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles ကုမ္ပဏီ၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ Seychelles တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့် Seychelles သို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုတွင် setup business အတွက် one stop service provider ဖြစ်သည်။
Seychelles ရှိ Company Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးအဆုံးအဖြတ်များကိုစတင်ရန်နှင့် Seychelles ရှိကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်ကူညီခြင်း၊ Seychelles ရှိ virtual office၊ Seychelles တွင်စီးပွားရေးဝယ်ယူမှု၊ Seychelles တွင် virtual နံပါတ်၊ စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှု၊ Seychelles တွင်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ Seychelles တွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Seychelles ရှိ Web development၊ Seychelles ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Seychelles ရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Seychelles ရှိအက်ပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Seychelles တွင် software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Seychelles ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊
Seychelles တွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် - Seychelles နှင့် Offshore ကုမ္ပဏီများတည်ထောင်ခြင်းနှင့် Seychelles မှကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးအဖြေများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးသည်။ Seychelles ရှိသင့်အားလပ်ရက်များသို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသော HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများအားငှားရမ်းရာတွင်ကူညီသည်။ Seychelles ရှိစီးပွားရေးအရောင်းနှင့်ဝယ်ယူမှု၊ Seychelles တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles ရှိ virtual နံပါတ်များ၊ Seychelles တွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ Seychelles ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ , Seychelles အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးနှင့် Seychelles အတွက်လည်ပတ်ငွေအရင်းအနှီးငွေကြေး, Seychelles အတွက်လုံ့လဝီရိယနှင့်လိုက်နာမှု, Seychelles အတွက်အိုင်တီဖြေရှင်းချက်, Seychelles အတွက် Web ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Seychelles အတွက်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Seychelles အတွက်အပလီကေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးမှု, Seychelles အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, Seychelles အတွက် software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့်ခ အလွန်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများမှာအနည်းငယ်အမည်ကိုမှ Seychelles အတွက် lockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။
Seychelles ရှိ IBC အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်
Seychelles အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Seychelles အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
"Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းမှုမရှိတဲ့ Seychelles နဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးကိုပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲက ၁ လို့ပြောတာမှန်တယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ စကေးစီးပွါးရေးများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှယ်လ်ရှယ်လ်တွင်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။ WE Seychelles အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
Seychelles ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Seychelles ရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းကိုင်များကသင့်အားလမ်းပြလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း seychelles (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း seychelles (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း seychelles
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း seychelles
Seychelles စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
Merchant Account Seychelles / Payment Gateway Seychelles
Seychelles BUSINESS COMPANY အတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူ
Seychelles ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Seychelles ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
Seychelles စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်စာရွက်စာတမ်းများ Apostille
Seychelles သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal
Seychelles တွင်နောက်ထပ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပြပါ
Seychelles ရှိ IBC အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ
● IBC Seychelles အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုကြေး (ပထမနှစ်) - ဒေါ်လာ ၄၄၀
●စဲရှဲလ်ကုမ္ပဏီတွင်ကုမ္ပဏီပါဝင်မှုအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့် ၀ န်ဆောင်ခ - ဒေါ်လာ ၂၅၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ဆိုင်းရှဲလ်တွင်ကုမ္ပဏီ TYPE ၁ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားအမည် ၃ ခုပေးပါ)
● Seychelles ရှိ IBC အတွက်အစိုးရသက်ဆိုင်ရာအခကြေးငွေတစ်နှစ်ပေးဆောင်ခြင်း
S Seychelles ရှိ IBC အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာကိုတစ်နှစ်ထောက်ပံ့ရန်
● Seychelles ရှိ IBC အတွက်ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးတစ်ယောက်ကိုတစ်နှစ်ပေးအပ်ခြင်း
● Seychelles ရှိ IBC အတွက်သင့်အတွက်စံပြကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ၊ အသင်းဝင်စာချွန်လွှာများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
Seychelles တွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ ဒေသအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့အကြံဥာဏ်ပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်စဲရှဲလ် (သို့) နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
IBC Seychelles အတွက်ကုန်သည်စာရင်း
Seychelles ရှိ IBC အတွက်လျာထားသောဒါရိုက်တာ
IBC Seychelles အတွက်အစုရှယ်ယာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
IBC Seychelles အတွက်အခွင့်အာဏာရှိသည့်အစုရှယ်ယာများတိုးပွားလာခြင်း
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Seychelles ၌ Million Makers မှတဆင့်
သင်သည် Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုပါက Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Seychelles ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်မည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးမည်။ Seychelles ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည် Seychelles ရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Seychelles ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ Seychelles ရှိဖောက်သည်များနှင့် Seychelles အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ရက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအနေဖြင့်သင်သည် Seychelles ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သင်ကုမ္ပဏီများအတွက်တည်ထောင်ထားသောကုမ္ပဏီများအတွက် Seychelles မှ offshore ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်ပါကကူညီလိမ့်မည်။ ငါတို့မှတဆင့် Seychelles ။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကို Seychelles တွင်ပါ ၀ င်သည်။ သင်လျှောက်ထားလိုပါကသင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်ရှေးလ်ရှယ်လ်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုလည်းသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အဘို့ ဆေးရှဲနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
Seychelles ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည် Seychelles ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
S Seychelles အတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်
S Seychelles များအတွက်နေထိုင်ခွင့်
S Seychelles အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
S Seychelles အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ seychelles ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် seychelles.
Seychelles ၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Seychelles တွင် Company Incoporation နှင့် Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည်တို့ကိုသင်သိထားသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles ၌ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့် Seychelles ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Seychelles ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ Seychelles ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများနှင့် Seychelles ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles ၌တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနည်းလမ်းကိုပေးသည်။
IBC အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ - Seychelles တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အမြားကိုပေးသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ Seychelles အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး မှပင်ပေးစွမ်းသည်။ Seychelles နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစပြုခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောသင့်သည်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်“ Seychelles ရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုဈေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
WE Seychelles အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
Seychelles ရှိ IBC အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် -
မှတ်ပုံတင်တွင် Seychelles ကိုကုမ္ပဏီအမည်ရှာဖွေပါ။
Seychelles တွင်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
Seychelles ရှိ IBC ရှိ IBC အတွက်အသင်း၏စာချွန်လွှာနှင့်စာတမ်းများ။
IBC အတွက် Seychelles / LLC ရှိ IBC အတွက်လက်မှတ်လက်မှတ်၏စာအုပ်။
IBC အတွက်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို Seychelles တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော Seychelles / LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ Seychelles ရှိ Seychelles / LLC တွင် IBC ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လျှင်။
မှတ်ပုံတင်ရုံး, မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်, IBC Seychelles / LLC တွင် IBC ။
Seychelles ရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Seychelles / LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ Seychelles ရှိ IBC / Seychelles ရှိ LLC ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သငျသညျ Seychelles ၌လိုအပ်သောလိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကခွင့်ပြုထားသည့် Seychelles တွင်ခွင့်ပြုချက်ပြုပါက Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည်လိုင်စင်မဲ့လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်နွှယ်သောစဲရှဲလ်ရှိဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: Gaming, လောင်းကစား, ထီ, Seychelles အတွက်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုအတွက်ကုန်သွယ် / ပွဲစား, Seychelles အတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း, Seychelles အတွက်အာမခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်း, ဘဏ္financialာရေးနှင့်ကုန်စည် -based ဆင်းသက်လာတူရိယာနှင့်အခြားရှီရှယ်လ်ရှိအခြားအာမခံ, ဘဏ္financialာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံသောဆင်းသက်လာတူရိယာများနှင့် Seychelles အတွက်ငွေပေးချေမှုအပြောင်းအလဲနဲ့န်ဆောင်မှုများ, ပိုက်ဆံ Seychelles, ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Seychelles အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံချုပ်နှောင်ထားန်ဆောင်မှုများတွင်လဲလှယ်။
သငျသညျ Seychelles ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်လိုင်စင်အတွက်မည်သည့်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
Seychelles နှင့် "United States of 109 အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" တွင်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
Seychelles တွင်ပြုလုပ်သူသန်းချီသောသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များနှင့် Seychelles ရှိ Professional CFA နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ Seychelles ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Seychelles ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ Seychelles ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများ၊
ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles ရှိအခွန်ထမ်းများနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တစ် ဦး ချင်းအခွန်ထမ်းများအတွက်အလွန်ကြီးမားသောအစုစုကိုစီမံသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles ရှိ Company Incorporation နှင့်ဖောက်သည်များကို Seychelles ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Seychelles နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းတို့ဖြင့်ကူညီသည်။
Seychelles ရှိလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ
Seychelles ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Seychelles ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Seychelles ရှိ Corporate အတိုင်ပင်ခံ၊ Seychelles ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Seychelles တွင် Corporate အတိုင်ပင်ခံ, Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီ၌ပါဝင်ခြင်းအတွက်, Seychelles ရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ, Seychelles ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် Corporate အတိုင်ပင်ခံ, Seychelles ရှိကော်ပိုရေးရှင်းအတိုင်ပင်ခံ Seychelles ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် Seychelles ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Seychelles ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများသည် Seychelles တွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်
Seychelles ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | ဗစ်တိုးရီးယားရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ
Seychelles နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
Seychelles ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်၊ Seychelles တွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပါ။
သင်၏ကုမ္ပဏီသည်စီရှယ်လ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် seychelles.
Seychelles ရှိ Accounts Outsourcing
သင့်ကုမ္ပဏီကိုသင် outsource လုပ်နိုင်သော Seychelles တွင်ထည့်သွင်းထားသည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို Seychelles ၌တည်၏။
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ယူပါ Seychelles တွင် Seychelles ရှိကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာများကိုဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ် Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
HR အတိုင်ပင်ခံ Seychelles ၌ပေးအပ်သည်သင်၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်၏ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးများနှင့် Seychelles တွင်စုဆောင်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ Seychelles ရှိအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ စဲရှယ်လ်နှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းSeychelles ၌တည်၏
Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ seychelles.
Seychelles ရှိ cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် Seychelles မှ offshore သို့မဟုတ် EU တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များအတွက်။
Seychelles အတွက် CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ Seychelles ရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအ ၀ င် Seychelles ရှိသင့်ဖောက်သည်များ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - စိုင်းရှဲလ်အတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် Seychelles ရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအ ၀ င် Seychelles ရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းမှုများသည် Seychelles ရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်စေးရှဲလ်နိုင်ငံမှဖြစ်သည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း seychelles Seychelles တွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
Seychelles ရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု seychelles, Seychelles ရှိ CryptoCurrency software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Seychelles ရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
Seychelles ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသော software ကိုထုတ်လုပ်သည် Seychelles ရှိစျေးသက်သာသောအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် Seychelles တွင်အမြန်ဆုံးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် Seychelles တို့ပါ ၀ င်သောတိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်အတွက်ရှာဖွေသူများ Seychelles ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတည်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝမှုများနှင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အရာများနှင့်၎င်းတို့ကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားမှုကြောင့် Seychelles ၌သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Seychelles တွင် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုနိုင်ငံခြားသားများအားထောက်ခံသည်။ ၄ င်းကို Seychelles တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles ရှိ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles ရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , Seychelles IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles IBC ပေါင်းစည်းခြင်း၊ Seychelles ကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles ကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Seychelles တွင် IBC ထည့်သွင်းမှုအတွက်ပံ့ပိုးမှု | Seychelles အတွက် LLC ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း | Seychelles ၌အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Seychelles ၌ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း | Seychelles ၌အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Seychelles အတွက် IC ပါဝင်မှု | Seychelles တွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Seychelles တွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Seychelles ၌စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles တွင်နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအား LLC ကို Seychelles တွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles တွင် LLC Registration, Seychelles တွင် LLC တွင်ပါဝင်ခြင်း၊ Seychelles တွင် Offshore LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles တွင် Offshore LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , Seychelles LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles ကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles ရှိနေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအား Seychelles တွင် International Business Company ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထောက်ခံသည်။ ၎င်းကို Seychelles တွင် International Business Company မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Seychelles တွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles ရှိ Offshore International Business Company ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Offshore International Business Company Registration Seychelles, Offshore International Business Company တွင် Seychelles ၌ပါဝင်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ Seychelles အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Seychelles အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Seychelles အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Seychelles ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, Seychelles ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles ရှိဒေသခံများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအား Seychelles တွင် Offshore Business Company ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ Seychelles ရှိ Offshore Business Company မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles တွင် Offshore Business Company တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles ရှိ Offshore Offshore Business Company ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ , Seychelles, Offshore Offshore Business Company တွင် Seychelles တွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ Seychelles ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Seychelles ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Seychelles ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, Seychelles ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles တွင်နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအား Seychelles တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထောက်ခံသည်။ ၄ င်းကို Seychelles တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles တွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles ရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles ရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Seychelles International ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Seychelles တွင် IC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်း Seychelles တွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles တွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles ရှိ Offshore IC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles ရှိ Offshore IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , Seychelles IC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles IC ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ Seychelles ကမ်းလွန် IC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles ကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles တွင်နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအား Seychelles တွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထောက်ခံသည်။ ၎င်းကို Seychelles တွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, LLC Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles တွင် Offshore LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles ရှိ Offshore LLC ကုမ္ပဏီ၊ Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ Seychelles LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Seychelles LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, Seychelles ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles ရှိနေထိုင်သူများနှင့် Seychelles တွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ ၎င်းကို Seychelles တွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles တွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ Seychelles IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Seychelles တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ ၎င်းကို Seychelles တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ Seychelles ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ Seychelles စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Seychelles ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
IBC ကို Seychelles တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ Seychelles တွင် LLC ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ Seychelles ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Seychelles ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Seychelles ၌အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန် IC ကို Seychelles တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ Seychelles ရှိ LLC ကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ပါ IBC ကုမ္ပဏီအား Seychelles တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ Seychelles ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများကို Seychelles ၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles မှ Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Seychelles မှ Offshore Company Registration၊ Seychelles တွင်အထောက်အကူများမှာ - ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Seychelles တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းသည် Seychelles ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ၏ထောက်ခံမှုဖြင့်အောင်မြင်သည်။ ၄ င်းကို Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Seychelles ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Victoria တွင်ရှိသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များအား Victoria သို့လာရောက်သည့်ကုမ္ပဏီများအားကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
Seychelles တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ ဗစ်တိုးရီးယားတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ
သင်စျေးသက်သာတဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုစဲချဲလ်မှာပေးပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့ပေးပါသည်။ ရှဲလ်ရှယ်လ်တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စဲရှဲလ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စဲရှဲလ်ကုမ္ပဏီတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စဲရှယ်လ်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ န်ထမ်းများ၊ ဗစ်တိုးရီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊
Seychelles တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ဗစ်တိုးရီးယားတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Seychelles တွင်တည်ထောင်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဗစ်တိုးရီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဗစ်တိုးရီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ဗစ်တိုးရီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ဗစ်တိုးရီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ဗစ်တိုးရီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ဗစ်တိုးရီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်။
Seychelles ရှိကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီများ ၀ န်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားသားတစ် ဦး ဖြစ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်ကို Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
Seychelles တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Seychelles တွင်ဘဏ်စာရင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားမြို့တော်၌မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သူများအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်အတွက်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက်ဗစ်တိုးရီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Seychelles | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများဗစ်တိုးရီးယား
Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်, Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်, Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အခကြေးငွေ Seychelles တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ Seychelles ၌မှတ်ပုံတင်ကုန်ကျစရိတ် Seychelles ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျစရိတ် Seychelles, ကုမ္ပဏီတည်ထောင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ် Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီကုန်ကျစရိတ် Seychelles ၌။
Seychelles ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး Victoria အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
Seychelles တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) Seychelles တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
Seychelles တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးစတင်ရန် (သို့) Seychelles တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) Seychelles တွင်နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန် Seychelles တွင်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်အချို့ရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
Seychelles တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ
IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို Seychelles တွင်ကူညီနိုင်သည်။ | Seychelles တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း Seychelles ၌နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Seychelles ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Seychelles ၌နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Seychelles ရှိ IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း Seychelles ၌ LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Seychelles ၌ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
IBC ကို Seychelles တွင်ထည့်သွင်းပါ Seychelles ရှိ LLC Incorporate Seychelles ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုထည့်သွင်းပါ Seychelles ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကိုဖွဲ့စည်းပါ။ | Seychelles ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ Incorporate | IC ကို Seychelles တွင်ထည့်သွင်းပါ Seychelles ရှိ LLC ကုမ္ပဏီ Seychelles ရှိ IBC ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ Seychelles ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ
Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Seychelles တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့အကြားမည်သို့ကွာခြားသနည်း။
အသုံးပြုသူအများစုကမေးသောဤအခြေခံမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အတွက်ဆိုင်းချယ်လ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်စဲရှဲလ်ကုမ္ပဏီတွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း (သို့) စဲရှယ်လ်ကုမ္ပဏီတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါက၎င်းတို့သည်ကုမ္ပဏီတွင်အသုံးပြုသောစကားလုံးများဖြစ်သည်။
Seychelles ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများ Seychelles ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Seychelles ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
သင်၏ကုမ္ပဏီကုမ္မဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကို Seychelles တွင်လည်းကောင်း၊ Seychelles ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Seychelles ရှိကုမ္ပဏီအမြောက်အများနှင့်အရည်အသွေးပြည့်မီသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းကိုင်များဖြစ်သော Seychelles ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ Seychelles နှင့် Seychelles ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများသည် Seychelles ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
Seychelles ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ Seychelles ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်စေးရှဲလ်ရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားအား Seychelles ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အထူးကူညီသည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတ ဦး ဖြစ်ပြီး Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ချင်လျှင်၊ သင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည်။
Seychelles တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Seychelles ရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း။
သငျသညျ Seychelles ၌ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်, Seychelles ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ် Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါကသို့မဟုတ် Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်, Seychelles တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဗစ်တိုးရီးယား။
Seychelles တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ရှိဈေးအပေါဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
Seychelles Portal ၏အစိုးရ
Air ကို Seychelles
Destination Seychelles - ခရီးသွားခြင်းနှင့်ခရီးသွားလမ်းညွှန်များ
Seychelles - အပူပိုင်းဒေသပရဒိသု
ပွဲတော် Kreol Seychelles
Seychelles ၏သဘာဝကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Trust မှ
အာဖရိကတောင်ပိုင်း Sahara: Seychelles
ကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်မှန်စာအုပ် - စейшယ်လ်
အာဖရိကလေ့လာရေးစင်တာ - UPenn: Seychelles စာမျက်နှာ
ဘီစီဘီဘီစီသတင်းနိုင်ငံ - စေးရှီးလ်
ပွင့်လင်း Directory စီမံကိန်း: စေးရှီးလ်
Absa ဘဏ် Seychelles
MCB Seychelles လီမိတက်
ဘဏ် AL Habib လီမိတက်
SBM Bank Seychelles လီမိတက်
BMI ကမ်းလွန်ဘဏ် (စေးရှဲလ်) www.bmibank.com.sc
Seychelles ၏ဗဟိုဘဏ် www.cbs.sc
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်ရှီရှဲလ်ရှိငွေကြေးခ ၀ ါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံး ၀ ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သော ၀ န်ထမ်းများအားကျွန်ုပ်တို့မထောက်ပံ့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ seychelles အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
● Seychelles အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူ၊ လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
● Seychelles အတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) ဆိုင်းရှဲလ်စ် (သို့) သို့သွားသောစက်မှုလုပ်ငန်းထောက်လှမ်းရေးအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊
● Seychelles အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကို Seychelles ဥပဒေအောက်မှာအနက်ရောင်စာရင်းဝင်ထားတဲ့တရားမဝင်၊
● Seychelles အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို Seychelles မှသို့မဟုတ်သို့ဖြစ်စေ Genetic material နှင့်ပတ်သက်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်သည်မဟုတ်။
● Seychelles အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဆိုင်းရှဲလ်စ်ရှိကုမ္ပဏီများသို့ဖြစ်စေကုမ္ပဏီများအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများမှနျူကလီးယားပစ္စည်းများရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့လည်းကောင်း၊ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
● Seychelles အတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူ၊ တိရိစ္ဆာန်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားပြုခြင်းသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းကိုဖြစ်စေ၊
●မွေးစားမိဘများလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်ဆိုင်းရှဲလ်စ်မှသို့မဟုတ်သို့စသည်ဖြင့်လူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုအပါအ ၀ င်ကလေးမွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိသော Seychelles အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ။
●စေးရှဲလ်ကုမ္ပဏီအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘာသာရေးဂိုဏ်းများနှင့် ၄ င်း၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုစေးရှဲလ်ရှ် (လ်) မှ (သို့) မှသို့သွားခြင်းမပြုပါ။
●ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအခြေခံသောစေးရှဲလ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်စေးရှီးလ်ကုမ္ပဏီအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးမထားပါ။
●ပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုတွင်လုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်စေးရှဲလ်ကုမ္ပဏီအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးမပေးပါ။
● Seychelles အတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည့် Seychelles မှသို့မဟုတ်သို့မသွားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် seychellesတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် seychelles, seychelles ဘဏ်အကောင့်, seychelles ယုံကြည်မှု seychelles ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု seychelles။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ Seychelles သည်
အခမဲ့တိုင်ပင်တောင်းဆိုခြင်း Seychelles သည်
အသုံးပြုသူက https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-seychelles/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-seychelles/